Jean Marc Maillot : « Zary lasa ankilabao ireo manana fahasembanana »
Jean Marc Maillot, izay talen’ny Crsa (comité régional de sport adapté) ...
Vitsy ireo sekoly nanoina ny antson’i Jean Marc Maillot, izay talen’ny Crsa (comité régional de sport adapté) avy atsy La Réunion, tamin’ny fiofanana notarihiny.
Sekoly telo monja (Crevie Soavinandriana, Acbhm Ambohimirary ary IME Equilibre Ambaranjana) no nahatonga atleta, izay niisa 11, tami’nireo nasaina tamin’ity.
« Ilaina ny fanarahana akaiky azy ireny mba tsy ho enta-mavesatra ho an’ny fiarahamonina. Ny ray aman-dreny no tokony hampirisika azy ireny voalohany », hoy i Jean Marc Maillot, omaly tetsy amin’ny kianjan’Alarobia nandritra ny lanonana fanolorana medaly ho an’ireo atleta. Ny alatsinainy teo no nanombohan’io fiofanana io ary amin’ny alahady izao no hody ireto delegasiona renioney (17 ka ny 11 tamin’ireo no atleta) ireto.
Natao indrindra hanomanana ny lalaon’ny Nosy sy ny lalao olimpika manokana ho an’ny handisport, izay hatao atsy Athènes amin’ny volana jona, ity fiofanana niarahan’ny Malagasy sy La Réunion ity. Ho an’i La Réunion manokana dia manana atleta 4 isan’ireo voafantina hiatrika an’io lalao olimpika manokana io izy ireo, tonga teto. Isan’ireny i Dijoux Ingrid, Lincar Loubadine, Cely Marie José ary Daniel Leveneur. « Manana atleta tsara i Madagasikara eo amin’ity taranja ity. Hitako niavaka i Iary Razanamaro sy Jean Nico Andriamahefa, izay isan’ireo nahazo medaly volamena tami’ny llaon’ny Cjsoi tany La Réunion farany teo », hoy ihany ity talen’ny Crsa La Réunion ity.
« Nahafahana niserasera sy nifampiazara traikefa iny fiofanana iny. Ny fifaninanana iraisam-irenena no tena mampiakatra ny lentan’ny taranja iray eto amintsika », hoy i Finaritra Ramiliarintsoa, izay mpianatra ao amin’ny Acbhm, isan’ireo namiratra teo amin’ny fifaninanana tsaa taorian’ny fiofanana notarihin’i Jean Marc Maillot iny.